कूटनीतिक भेटमा 'बडी ल्याङ्ग्वेज'को महत्त्व
शशी शर्मा काठमाडाैं, ५ जेठ
बडी ल्याङ्ग्वेज अशाब्दिक संवादको मुख्य भाग हो । शब्दमा व्यक्त नगरी शारीरिक व्यवहारद्वारा सम्प्रेषण हुने विचार र भावना नै अशाब्दिक संवाद हो । बडी ल्याङ्ग्वेज अनुहारको भाव, शारीरिक आसन, इशाराहरू, आँखाको चाल र शारीरिक स्पर्शको रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ । बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको सांकेतिक भाषा हाेइन, यो अशाब्दिक संवाद हो, जसको भूमिका मानवीय व्यवहार र संवादमा ९३ प्रतिशत हुन्छ ।
तपाईंले प्रस्तुत गर्ने अशाब्दिक संवादले कुनै पनि व्यक्तिसँगको संवादमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । कूटनीतिक संवादमा त झन् अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्छ । तपाईंले व्यक्त गर्ने अशाब्दिक संवादले तपाईंले अर्को व्यक्ति एवं राष्ट्रप्रति गरिरहनुभएको आदर, सम्मान र विश्वास झल्काइरहेको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति र संस्कार कसैले पनि जन्मजात लिएर आएको हुँदैन । तर, जो व्यक्ति कूटनीतिक क्षेत्रमा तथा पदमा रहन्छ, उसमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण र सीप भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र शिष्टाचार नै हो । जो कुनै पनि कूटनीतिज्ञले सिक्नु र जान्नु जरुरी हुन्छ ।
बडी ल्याङ्ग्वेजको महत्त्वपूर्ण एउटा फर्म क्रसलेग हो । पूर्वीय समाजमा विशेषगरी आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूसामु बस्दा औपचारिक र अनौपचारिक भेट गर्दा क्रस लेग गरेर बसिँदैन ।
जापानमा क्रस लेगलाई अनादरपूर्ण व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरू जस्तैः युनाइटेड अरब इमिरेट्स, भारत र नेपालमा पनि क्रस लेग गरेर बस्नुलाई अनादरको रूपमा लिइन्छ ।
दाँत देखाउनु मात्र हास्नु होइन, व्यक्तिले कस्तो प्रकारले मुस्कान छोडेको छ, त्यसको प्रभाव सांकेतिक रूपमा उसको मुहारको भावले देखाउँछ । त्यस्तै गरी शरीरको आसनले कुनै पनि भेटमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कसरी शिष्टता प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँदछ ।
कुनै पनि औपचारिक भेटमा व्यक्ति क्रस लेगको पोजिसनमा बसिरहेको छ भने त्यसको मनोवैज्ञानिक कारण हुन्छ । उसको भावना अवचेतन मनबाटै प्रकट भइरहेको हुन्छ । जस्तैः रक्षात्मक, क्रोधित, उदासीन अथवा उदेकलाग्दो भाव । यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई आमदर्शक एंव मानिसहरूले राम्रोसँग नियालिरहेका हुन्छन् ।
प्रसंग केही दिनअगाडि नेपालका माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीज्यू र नेपालका लागि भारतीय महामहिम विनयराज क्वात्राज्यूको औपचारिक भेटघाट । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू जस्तैः टीभी, न्यूज पेपर, अनलाइन मिडिया र सोसल मिडियामा व्यापक विरोध गरिएको तस्वीर :
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा (तस्वीर : परराष्ट्र मन्त्रालय)
तस्वीरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीज्यू औपचारिक र प्रोफेसनल आसनमा र नेपालका लागि भारतीय महामहिमज्यू क्रस लेग आसनमा देख्न सकिन्छ । ३२ वर्षदेखि विदेशी सेवामा सेवारत महामहिमज्यूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिष्टाचारसम्बन्धी ज्ञान नभएको त पक्कै होइन होला ! यो बडी पोस्चरले संकेत गर्छ, भारतले नेपाललाई कुन दर्जामा राखेको छ ।
यो एउटा गुड म्यानरसम्बन्धी सानो उदाहरण मात्र हो । पब्लिक रिलेसन र कूटनीतिक व्यवहारमा भारतले कति मर्यादा र शिष्टाचार पालना गरेको छ, यो त व्यवहारले देखाइरहेको छ । यसका बारेमा कसले आवाज उठाउने ? केवल २/४ जनाले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्दैमा उहाँहरूको धारणा, व्यवहार र शिष्टाचारमा परिवर्तन आउला ?
कूटनीतिक भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फ्रेन्चहरूले १७औँ शताब्दीदेखि सुरू गरेका थिए । हाल कूटनीतिक भाषा र मर्यादालाई विश्वभर नै अत्यन्तै महत्त्वका साथ लिइन्छ । तसर्थ हाम्रो देशको इज्जत र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्न हाम्रा देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिष्टाचारमा सचेत गराउन जरुरी छ ।
यसैगरी, अन्य देशका कीटनीतिज्ञले पनि शिष्टाचार पालना नगरेमा त्यसको खुलेर प्रतिकार गर्न सम्बन्धित निकाय हिचकिचाउन हुँदैन । (लेखिका भाषण तथा संवाद कलासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने संस्था नेपाल आन्टरप्रिनरसिप एजुकेसन फाउण्डेसन (नीफ)की प्रमुख हुन्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, १५:३९:००